Inkcazo yesiLwimi kunye nemizekelo
Kwiilwimi , ukubonakalisa ulwimi ngolwimi ngokuchaseneyo neelwimi, ulwimi njengenkqubo engabonakaliyo yempawu .
Oku kwahlukana phakathi kweelwimi kunye ne- parole kwenzelwa okokuqala nguSwitzerland isiLwimi saseFerdinand de Saussure kwiNkcazo yeGenerational Linguistics (1916).
Ukususela kwisiFrentshi, "intetho"
"Ngaba kunokuba kukho isayensi yolwimi, ukuba kunjalo, ngaba kufuneka senze ukuthoba okokuqala ukuba senze ukuba sibe nefanelekileyo? Ngaba kufuneka 'sibulale ukuze sichitha,' ukucaphula i-Wordsworth? Yenza enye into yokucoca ngolwimi ngendlela efana nokuba nenxalenye enye ehlala kwaye ihamba ngeendlela zobuqhetseba, kwaye enye inokuhlala kwindawo enye kwaye ngoko iyakwazi ukuchithwa ukuze ibonakalise isimo sayo sangaphakathi. , xa ehlukanisa i- parole (icala elingalawulekanga) ukusuka kwisilimi (ecaleni elincinci). I-pallo ibhekiselele ekusebenziseni ulwimi loluntu lwabantu ngabanye kwimpilo yabo yemihla ngemihla, kwaye imbi kakhulu ukuba ifundwe, ngokweSussure. isakhiwo seelwimi, kwaye isakhiwe ngokufanelekileyo njengenkqubo yeenkqubo. Okokugqibela yinto enokuphandwa ngokwesayensi. "
(Leo Van Lier, i -Ecology kunye neSemiotics yoLwimi lokuFunda: I-Perspective ye- Sociologist Birkäuser, 2004)
" Iilwimi / iPhalamende -Ukuthethwa apha kukwahlukileyo okwenziwe yiSwitzerland yamaSundulu." Xa i- parole yindawo yokusetyenziswa kolwimi, 'iimbono' okanye 'imiyalezo,' nokuba ithetha okanye ibhaliwe, ulwimi inkqubo okanye ikhowudi (le code de la langue ') evumela ukuzaliseka kwemiyalezo ngamnye. "
(UStephen Heath, iNqaku loMguquleli kuMfanekiso-Umculo-Umbhalo kaRoland Barthes.) Macmillan, 1988)
I-Analogy ye-Chess Game
"I- langue-parole dichotomy yafakwa kwiilwimi ngoFerdinand de Saussure (1916), owasebenzisa umzekeliso we-chess game ukubonisa oko kuqukwayo. Ukubandakanya umdlalo we chess bobabini abadlali mabaqale bazi i- langue ye-chess- imigaqo yokuhamba kunye nesicwangciso esipheleleyo sokudlala. ulwimi lubeka iingxaki, kwaye lubonelela ngesikhokelo, umdlali ngamnye angayenza kwisenzo sokudlala umdlalo. Ukukhetha okwenene kubonisa i- parole - ukukwazi ukusebenzisa ulwazi olungapheliyo lwe-chess ( ulwimi ) kwindawo ethile yokudlala umdlalo. "
(UMarcel Danesi, uLwimi loLwimi lwesiBili: Umbono ovela kwicala lasekunene leBrain .
IsiNgesi IsiNgesi (iilwimi ezahlukeneyo)
IiVolumesi zaseFransi - Voyelles françaises
I-10 ye-Sitcom Bosses
Ukugubha iNyanga yeLifa leMveli yase-Arabhu
Juz '22 yeQuran
Iingcali eziMnandi zeMculo zoNyaka ze-2 ukuya ku-4
Ukwakha ibhokisi yoNxibelelwano lweNgcaciso